Ny Herinandro Tao Bahrain (04/06/06) · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 21 Septambra 2017 5:15 GMT
Miaraka amin'ny maripàna tafakatra ambonin'ny 45°C, nangotraka ny lohataona tao Bahrain. Ary dia miha-mafana andro aman'alina izany, noho ny ady mihamitombo atao amin'ilay orinasa misahana fifandraisandavitra ao an-toerana Batelco, izay nanova tamin'ny 11 May 2006 ny tolotra aterineto nomeny ho mandritry ny alina tany anatin'ireo fanambaràna an-gazety sy imailaka nalefa ho an'ny mpanjifa.
Tena efa tetika maty paika ve ilay fanondrotana mba ho entina hanatsaràna ny tolotra sa endrika hafa iray fotsiny ihany ho famerana ny fahafahana miditra aterineto, indrindra ho an'ireo faritra mahantra ao Bahrain?
Ankoatra ireo tranonkala amin'ny teny Arabo sy Anglisy manohitra ny lazain'ireo mpanjifa ho tolotra mitanila (izay tsy iza fa i Mahmood Al Yousif Ray Mpiahy ny bilaogera ao Bahrain ihany no mpitondratenin'ny tranonkala amin'ny teny Anglisy ) , mitombo ny tsindry manjo ilay orinasa mba hiverenany amin'ilay fanapahankevitra amin'ny fomba tsy mahazatra, tsy mbola nisy nahita hatrizay tao amin'ilay nosy fanjakàna.
Nasian'izy ireo fihaonana ho an'ny daholobe mba hiresahana ary hanoherana ireo fanovàna, bokotra tany amin'ireo bilaogy hiantsoana fampiatoana ilay lazain'ireo mpanjifa marobe ho fomba fanao tsy rariny ataon'ilay orinasa, andro iray ho fibodoana ny Batelco, fanaovana ny Tale Jeneralin'ilay orinasa ho toy ny ankàlana misolo vaika an'i Mahmood (!!), hira iray amin'ny gadona rap, fampitahàna ireo mpanifa aminà mpiasa tsy manana fifanarahana asa, taratasy fandraikitra amin'ny fiara ary tatitra tsy voamarina momba ireo antso hanao fihetsiketsehana hanoherana ilay mpanome tolotra fifandraisandavitra.
Any anivon'ireny mpanifa tsy faly rehetra ireny, misy bilaogera iray monja toa tena faly sy mahazo aina be tamin'ireo fanovàna.